'प्रेमगीत-३' हिन्दीमा डबिङ्ग गर्दा भ्वाईस एक्टरले कति लिए पारिश्रमिक ? - www.dthreeonline.com
‘प्रेमगीत-३’ हिन्दीमा डबिङ्ग गर्दा भ्वाईस एक्टरले कति लिए पारिश्रमिक ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ३१, २०७७ समय: १२:११:०७
इटहरी/ नेपाल बाहिरका फिल्महरूले नेपालि सिनेमाको बजारमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बेला अब नेपालि फिल्मले पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पाईला टेक्ने मौका पाएको छ । सन्तोष सेन निर्मित फिल्म ‘प्रेमगीत-३’ ले बलिउड फिल्म उधोगमा पाईला राख्न सफल भएको हो । यो नेपालि फिल्म ईतिहासकै पहिलो पटक हो । यो फिल्मको हाल हिन्दी डबिङ्ग शुक्रबार सम्पन्न भैसकेको छ भने यतिबेला निर्माता सेन फिल्मको अन्य चाजोपाजो मिलाउन मुम्बईमै छन् । फिल्ममा बलिउडका चर्चित कलाकारको आवाज भरिएको छन् । बलिउडका चर्चित कलाकार भनिएपछि सबैलाई खुल्दुली पारिश्रमिककै हुन्छ ।
डिथ्री अनलाईनसंग कुरा गर्दै निर्माता सेनले भ्वाईस एक्टरको लागि मात्रै पनि राम्रै खर्च भएको बताए । जम्मा खर्च यति नै भनेर यकिन नभए पनि फिल्ममा मुख्य भूमिकामा ८/१० जना रहेको र सो क्यारेक्टरहरुको लागि ए जना बराबर २ देखि ६ लाख सम्म पारिश्रमिक दिईएको उनले बताए । यस्तै सानोतिनो क्यारेक्टरमा भ्वाईसओभर गर्ने कलाकारलाई ५०-६० हजारको दरले पारिश्रमिक दिईएको हामीसंगको कुराकानीमा सेन बताउछन । फिल्ममा बाहुबलिका कलाकारहरुले समेत भोइस एक्टिङ्ग गरेका छन् । नेपाल र भारत एकसाथ प्रदर्शन हुने भनिएको उक्त चलचित्रको सम्पूर्ण काम सकिएको छ ।
केही महिनादेखी मुम्बईमा रहेर गुपचुपमै ‘प्रेम गीत ३’ को काम गरिरहेका निर्देशक सन्तोस सेनले यो पटक बलिउडका ‘A’ श्रेणीका प्रविधिकसंगको सहकार्यमा उक्त काम गरेका हुन । फिल्म ‘प्रेम गीत-३’मा कलाकारदेखि लिएर सम्पूर्ण क्रियाकलापमा धेरै मेहनतका साथ गरिएको हुनाले उक्त फिल्मले नेपाली सिने उधोगलाई अझै उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । उक्त फिल्ममा प्रेमको आमाको भूमिकामा बाहुबलिकी भोइस एक्टर सविना मलिक मौसमले आफ्नो भोइस दिएकि छिन भने संकेत म्हत्रीले प्रेमको र पूजा पन्जावीले गीतको भूमिकामा आफ्नो भोइस दिएका छन् ।
उनिहरुसंगै आयुशी, अजय यादव, शक्ती सिंह, सचिन गोले र समयको भोइस एक्टिङ पनि उक्त फिल्ममा रहेको छ । फिल्मको क्यारेक्टर अनुसार बलिउडका कलाकारहरुको दरिलो साथ रहेकाले सो फिल्म हिट हुने सेनले दाबि गरेका छन् । फिल्मको हिन्दी डबिङ र एडिटिङ्गको काम सकिएतापनि फिल्मको प्रदर्शन मिति भने तय गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रदर्शनमा अन्योलता छाएको फिल्मको बलिउड प्रदर्शन पनि टुंगो छैन । करिब २०० सय बर्षअघिको प्रेम काहानीलाई पर्दामा उतारेको फिल्म स्वर्गिय छेतन गुरुङ्ग र सन्तोष सेनले संयुक्त रुपमा निर्देशन गरेका छन ।
सन्तोष सेन निर्माता रहेको फिल्ममा सह-निर्माता कुमार सान शाह र ओएसआर डिजिटल छन् । भने कार्यकारी निर्माता चक्र बहादुर चन्द र मिलन सेन रहेका छन । फिल्ममा प्रदिप खड्का, नव नायिका कृष्टिना गुरुङ, सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ, संतोष सेन, माओत्से गुरुङग, प्रेम पुरी, नवनायक मनिष रावत, अनुभव रेग्मी, सुजल बस्नेत, सम्बृद्धि शाही ठकुरी, योगीसा खत्री, लक्ष्मी बर्देवा, क्रिजल गौतम लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।